शिवरात्रिलाई पशुपतिनाथ झकिझकाउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
दर्शनार्थीलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य
बिहान ३ बजेदेखि खोलिने चारै ढोकाबाट दर्शनको व्यवस्था
फाल्गुन १६, २०७८ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — धुमधामका साथ शिवरात्रि मनाउन पशुपतिनाथ क्षेत्र झकिझकाउ पारिएको छ । यस पटक दर्शनार्थीलाई मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न बर्सेनि हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थी भेला हुने गरेका छन् । यस पटक शिवरात्रि आगामी मंगलबार परेको छ ।
कोरोना संक्रमणविरुद्धको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिमा भेला हुनेलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरेको हो । ‘सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी पनि कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ कोषका कोषाध्यक्ष तथा महाशिवरात्रि पर्व प्रचारप्रसार व्यवस्था उपसमितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले भने ।
भक्तजनको सुरक्षाको विशेष योजना बनाइएको छ । उक्त दिन पशुपति क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । भकुन्डोलमा प्रहरीको शिविर राखिनेछ । मूल शिविरसँगै खोजखबर कक्ष रहने छ । मेला क्षेत्र र दर्शन मार्गमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिएका छन् । आवश्यकताअनुसार प्रहरीका कमान्ड पोस्ट र सबकमान्ड पोस्टको समेत व्यवस्था गरेर सुरक्षा दिइने सुवेदीले जानकारी दिए । दर्शन मार्गमा ब्यारिकेड जडानलगायतका काममा नेपाली सेनाले सघाउने भएको छ ।
सुरक्षाकर्मीसँगै नेपाल स्काउटले समेत सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । करिब ५ हजारको संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन गरिने प्रचार उपसमिति सचिव रेवतीरमण अधिकारीले बताए । स्काउटका स्वयंसेवकले श्रद्धालुको लाइनको सहजीकरण गर्नेछन् ।
मन्दिर दर्शनका लागि तीनवटा दर्शन मार्ग व्यवस्था गरिएको छ । गुह्येश्वरी–गौरीघाट, उमाकुण्ड–दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रगाडेश्वर छेउको उत्तरतिरको ढोकाबाट एउटा लाइन हुनेछ । अर्को लाइन मित्रपार्क जयबागेश्वरी, इटापाखा भएर भुवनेश्वरीस्थित फलामको ढोका हुँदै पश्चिम ढोकाबाट प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बत्तीसपुतली, गौशाला, एयरपोर्ट, तिलगंगा भएर आउने भक्तजनका लागि चार शिवालय हुँदै प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार तिलगंगा राममन्दिरतर्फबाट समेत लाइनको व्यवस्था गरिने अधिकारीले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्थापनका लागि ५ ठाउँमा पार्किङ हुनेछ । तिलगंगा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्यालय, महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला, सिफलको चौर र गुह्येश्वरी क्षेत्रमा गाडी पार्किङ छुट्याइएको छ । सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर एयरपोर्ट–चाबहिल सडकको आधा भागमा सवारी चलाउन दिने र आवश्यकताअनुसार डाइभर्सनको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
तस्बिरहरू : सन्जोग मानन्धर
सजावटलाई विशेष ध्यान दिइएको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले बताए । पशुपतिनाथ प्रवेशद्धारसहित मन्दिर क्षेत्रलाई बत्ती र फूलले विशेष किसिमले सिँगारिएको छ । ‘सजावटको व्यवस्था दाताले गरेका हुन्,’ उनले भने ।
कोषाध्यक्ष सुवेदीका अनुसार यस पटकको शिवरात्रिको खर्च ७५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । भक्तजनले चढाएको भेटीलगायत अन्य शुल्कबाट आम्दानी भने १ करोड २५ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ । कोषले शिवरात्रिको भोलिपल्टदेखि वनकाली क्षेत्रमा एक सातासम्म मेला आयोजना गर्नसमेत व्यापारिक संघसंस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ ।
विभिन्न ६० वटा संस्थाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन् । मन्दिर नजिकैको कोर क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र बेडसहितको नेपाली सेनाको मूल स्वास्थ्य शिविर पनि रहनेछ । आपत्कालीन अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र दमकलको समेत व्यवस्था हुनेछ । प्रत्येक दर्शन मार्गमा एम्बुलेन्स राखिने अधिकारीले जानकारी दिए । शिवरात्रिलाई ध्यान दिएर सरसफाइ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । वाग्मती नदी आसपासको क्षेत्र सफा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तह, स्वयंसेवी संस्थाको सहयोगमा सफाइ गरिएको छ ।
दर्शनार्थीका जुत्ता–चप्पल राख्नका लागि ५ ठाउँ हुनेछ । भुवनेश्वरी चोक, बज्रघरको दक्षिण, दक्षिणामूर्ति, राम मन्दिरनजिक र वाग्मतीपारि जुत्ता–चप्पल राख्ने व्यवस्था छ । बिहान ३ बजेदेखि चारै ढोकाबाट पशुपतिनाथ दर्शनको व्यवस्था हुनेछ । विशेष पूजा बिहान र साँझ ६ बजेपछि मात्र हुनेछ । दर्शनार्थी बाहिर निस्किएपछि कोर क्षेत्रभित्र र बाहिरचाहिँ चन्दन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विभिन्न संघसंस्थाबाट आवास, भोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ । निःशुल्क भोजनका लागि ९५ वटा संघसंस्थाले अनुमति लिएका छन् । उनीहरूले भोजन, पानी, चिया वितरण गर्नेछन् । आवास, भोजन वितरण गर्ने संस्थाले आफ्नो स्टलमा डस्टबिन राख्न अनिवार्य गरिएको छ । प्लास्टिकको कप प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । साधुसन्तका लागि भोजन, आवाससँगै धुनीको पनि व्यवस्था मिलाइएको कोषले जनाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ११:०५
पुरातत्त्व विभागद्वारा निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार, अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली
फाल्गुन ९, २०७८ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनविपरीत ज्याठास्थित पुरातात्त्विक महत्त्वको छुस्या महाविहारको जग्गामा वडा कार्यालय भवन बनाउन सुरु गरेको छ । महानगरको वडा २७ को भवन बनाउन शिलान्यास गरिएको स्थानमा महाविहारअन्तर्गतको वयलाछी फल्चा थियो ।
तर‚ स्थानीयले भत्किएको फल्चा पुनर्निर्माणको माग गर्दै आएकामा महानगरले भने वडा कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो । ‘हामीलाई वडा कार्यालय भवन बनाउन लागिएको जानकारीसमेत दिइएन,’ छुस्या बहाः सर्वसंघका महासचिव त्रिरत्न वज्राचार्यले भने, ‘शिलान्यास गर्न आएपछि पो थाहा भयो ।’
महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, वडाध्यक्ष चिनियामान वज्राचार्यले गत माघ २३ मा भवन शिलान्यास गरेका थिए । महानगरको अनुदानमा बन्न लागेको भवन ५ तले हुनेछ । महाविहारछेउको कित्ता नम्बर २१३१ को ४ आना जग्गामा उक्त भवन बन्न लागेको हो । वडाध्यक्ष वज्राचार्यका अनुसार ५ तलामध्ये २ तला मात्र वडा कार्यालयका लागि प्रयोग हुनेछ । बाँकी ३ तलामा पसल, सभाहल तथा एक तला ज्याठा सामुदायिक क्लबलाई दिइनेछ । भवन बनाउन करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा २ करोड ८० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा प्रतिष्ठा–रमिता–अम्बुजा जेभीले ठेक्का लिएको उनले बताए ।
भवनको बाहिरी भाग नेपाली वास्तुकला झल्कने गरी डिजाइन गरिएको महानगरका इन्जिनियर अमित वज्राचार्यले बताए । उनका अनुसार भवन लिफ्ट, र्‍याम्पसहित ज्येष्ठ नागरिक र अपांगमैत्री रहनेछ । २०७९ पुस मसान्तसम्म निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए ।
पुरातात्त्विक स्थलमा भवनलगायत संरचना बनाउन पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले गरेको छ । तर, महानगरले विभागको स्वीकृति नलिएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘पुरातात्त्विक स्थलमा संरचना बनेको जानकारी आएपछि त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली पठाएका छौं,’ कुँवरले भने, ‘प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर के गर्ने निर्णय हुन्छ ।’
विभागले तत्काललाई काम रोक्न पत्राचारसमेत गरेको छ । ‘उक्त कार्य कसले गर्न लागेको हो ? के कस्तो संरचना निर्माण गर्न लागेको हो ?,’ पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त वयलाछी आफैं पनि सांस्कृतिक महत्त्वको स्थान भएको र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विहारसँगै निर्माण हुने संरचनाले सम्पदाको महत्त्वमा के–कस्तो असर पर्छ या पर्दैन ? उक्त कार्य गर्न वडा कार्यालयसँग समन्वय गरिएको छ कि छैन ? यथाशीघ्र विभागलाई जानकारी गराउनु हुन एवं उल्लिखित विषयमा स्पष्ट नभएसम्मका लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाउन अनुरोध गर्दछु ।’
भवन निर्माण रोकेर उक्त स्थानमा उत्खननको माग गर्दै स्थानीयवासीले पुरातत्त्व विभागमा निवेदनसमेत दिएका छन् । ‘वयलाछी पाटीले ओगटेको स्थानमा वडाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने वा अरू कुनै पनि आधुनिक संरचना निर्माण गर्नु भनेको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थानलाई मास्नु हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार आपराधिक र दण्डनीय काम हो,’ निवेदनमा छ, ‘यस्तो कार्यको हामी घोर विरोध गर्छौं ।’ स्थानीयवासीले पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको गणेश, विष्णु, शिवलिंगलगायत पौराणिक महत्त्व रहेको छुस्या बहाः र सँगैको खाली क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वडाध्यक्ष वज्राचार्यले भने महाविहारको नभई ज्याठा सामुदायिक क्लबको जग्गामा भवन बनाउन लागेको दाबी गरे । ‘हामीसँग जग्गा छ, भवन बनाएर बस्नुस् भनेपछि काम सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘क्लबको जग्गामा भवन बनाउँदा अरूलाई केको आपत्ति ? आफूले गरे ठीक, अरूले गरे बेठीक भन्ने मानसिकता राख्नेहरूले विरोध गरेका हुन् । पहिला किन चुप लागेको ? अहिले आएर विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’
वज्राचार्यले क्लबको जग्गामा भवन बनाउन लागिएको दाबी गरे पनि मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा भने यो कित्ताको जग्गाधनीको महल खाली छ । ‘उपत्यकाका अधिकांश महाविहारका जग्गा दर्ता नै भएका छैनन् । यहाँको पनि दर्ता नभएर खाली नै छाडिएको छ,’ सर्वसंघका सचिव वज्राचार्यले भने, ‘यहाँ पनि भएको यस्तै हो ।’
महाविहारसँगै रहेको शिलालेखमा पनि यो स्थानमा फल्चा रहेको उल्लेख छ । नेपाल संवत् ७८८ को शिलालेखमा लोकहितका लागि धर्मशाला बनाएको र लोकेश्वर देवताको प्राणप्रतिष्ठा गरी त्यो स्थान गुणाकर महाविहार (छुस्या बहाः) लाई संकल्प गरेर दिएको उल्लेख छ । उक्त शिलालेख ध्वाकाबहाः बस्ने गुणज्योति वज्राचार्य र श्रीमतीहरू पद्मनिल, लक्ष्मी, हेरमती, जेठो छोरा धनसिंह, बुहारी मनाहरी, नाति परिखदेव, नातिनी बुहारी धनवती, पनाति रत्नवती, बहिनी शीलावतीहरूले प्रताप मल्लको पालामा बनाएका हुन् ।
काठको फल्याक राखेर बनाइएको उल्लेख गर्दै शिलालेखमा फल्चाको महत्त्व पनि दर्शाइएको छ । फल्चाको संरक्षण र सरसफाइ गरेका हजार वटा विहार बनाई यज्ञ गरेको जतिकै पुण्य मिल्ने उल्लेखसमेत छ । तर, मर्मतसम्भार नहुँदा फल्चा भत्कियो । फल्चा भत्किएपछि त्योसँगै रहेको चैत्य बिग्रने डरले २०२९ मा चैत्य, शिलालेखलगायत विहारभित्र राखिएको थियो । सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी आलोकसिद्धि तुलाधरका अनुसार छुस्या महाविहारछेउको चैत्य शिखरशैलीको छ । यस्ता चैत्य काठमाडौंमा ३ वटा मात्र छन् ।
प्राचीन नेपाली वास्तुकलामा बनेको यो विहार मल्लकालमा बनेको हो । यहाँ मल्लकालीन काष्ठकलाको नमुना देखिन्छ । रत्न वज्राचार्यले ‘द गुनाकर विहार’ पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार यो विहारको निर्माण विसं १७०६ मा सुरु भएको थियो । यसको उद्घाटन भने निर्माण सम्पन्न भएको १८ वर्षपछि प्रताप मल्लले गरेका थिए । विसं १७५६ र २०५८ मा गरी दुई पटक विहारको जीर्णोद्धार भएको अभिलेख छ । दुईतले विहारमा प्रवेशद्वार दायाँबायाँ सिंहका मूर्ति छन् । आकर्षक देखिने चारकुने विहारको बीचमा खुला चोक छ । चोकको बीचमा चैत्य छ । शिखर शैलीमा निर्मित प्रस्तरको मन्दिर पनि छ त्यहाँ । चोकमा अवलोकितेश्वर, कुवेश्वर, सुखावती लोकेश्वर, सारीपुत्र र मौद्गल्यानका मूर्ति छन् । यहाँ बौद्ध परम्पराअनुसार पूजा गरिन्छ ।
काठमाडौंको मुख्य जात्रा मानिने इन्द्रजात्रामा समेत यहाँको खुला ठाउँ प्रयोग हुँदै आएको छ । परिवारका दिवंगत सदस्यको सम्झनामा प्राचीन सहरको बाहिरी क्षेत्र हुँदै विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गर्ने गरिन्छ । त्यही क्रममा वडा कार्यालय बनाउन लागिएको क्षेत्र विश्रामका लागि प्रयोग हुन्छ । ‘यो खुला क्षेत्रमा जाडोमा घाम ताप्न प्रयोग हुन्छ । मान्छे मर्दा यहीं जम्मा हुन्छन् । सुत्केरी यहीं घाम तापेर तेल लगाउँछन्,’ ज्याठाका अच्युत रत्न वज्राचार्यले भने, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हामीलाई पत्तै नदिई मास्न खोजियो ।’
२०७४ मा महानगरका सबै ३२ वटै वडा कार्यालय भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए प्रमुख शाक्यले । तर सबै भवन बनिसकेका छैनन् । सबै भवन नेपाली वास्तुकला झल्कने गरी एकै खालको बनाउने गरी डिजाइन गरिएको बताइएको छ । तर, मुखले नेपाली वास्तुकला भन्ने तर पुरातात्त्विक सम्पदा मास्ने काम गरिएको सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘नाराचाहिँ संरक्षणको दिने तर काम भने उल्टो गर्ने,’ सम्पदा संरक्षण अभियानकर्मी तुलाधारले भने, ‘रक्षक नै भक्षक बन्ने ? यही कारण वडाका बाँकी भवन बन्न नसकेका हुन् । सम्पदा र सार्वजनिक ठाउँ ताकेपछि कसले बन्न दिन्छ त ?’
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७८ ०९:५७
सूर्यविनायक नगरपालिकाकाको बजेट १ अर्ब ९२ करोड